Oromoon biyyaa fi biyyaan alattis rakkoo cimaa keessa jira, jedha dokmentariin Reuters - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Oromoon biyyaa fi biyyaan alattis rakkoo cimaa keessa jira, jedha dokmentariin Reuters
Oromoon biyyaa fi biyyaan alattis rakkoo cimaa keessa jira, jedha dokmentariin Reuters
Reuters dokmentarii rakkoo Oromoon biyyaa fi biyya baqaatti keessa jiru argisiisu gadi lakkise. Oromoonni rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti isaan mudatu baqatan daandii baqaa irratti rakkoo guddaaf saaxilamaa kan jiran ta’uu isaati dokmentariin Routers kan ifa godhe. Akka dokmentarii kanaatti Oromoonni biyyoota ollaa keessatti dararamu; hedduun isaanii ammoo gammoojjii Saharaa fi Galaana Mediteraaniyaanii keessatti dhumu.
Baqattoonni Oromoo bu’i bayii heddu keessa ce’anii lubbuun Awurooppaa seenuuf hiree argatanis, dararaa fi qormaata jireenyaatti xumura laatuu hin dandeenne. Sababni isaas biyyoonni Awurooppaa hedduu ammas dhimma baqattoota Oromoof xiyyeeffannaa gayaa laatuu dhabuu isaaniiti.
Dokmentariin Reuters kuni Itoophiyaa keessatti Oromoonni haala hamaa keessa jiraachuu isaanii ibsa. Sadaasa 2015 eegalee namoonni 500 oli ajjeefamuus saaxila.
Tankaarfiin Fayyisaa Leellisaa Olompikii Rio irratti fudhate dhimmi Oromoo hawaasa addunyaa biartti hubannoo fi xiyyeeffannaa dabalataa akka argatuuf hedduu gargaaruu isaas dokmentariin Reuters kuni mirkaneessa.
Previous articleHiriirri Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti geggeeffamaa jiru mootummaa Itoophiyaatti qormaata cimaa ta’eera jetti Ameerikaan
Next articleAtleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Kanaadatti geggeeffame irratti Woyyaanee balaaleffate